Doollar-ka Mareeykanka oo lagu soo sawiray Haweeneey Madow ah & Sababta oo la ogaaday.(Daawo Sawirada) - iftineducation.com
iftineducation.com – Inta badan Bangiyada gudaha dalka Mareeykanka ayaa markii ugu horeeysay waxaa lagu arkay lacagta Dollar-ka ah oo ay ku sawiran tahay Haweeneey taariikh ahaan dalkaas caan ka ah waliba si xun loo soo cunsuriiyeeyay (Slave) .
Haweeneeydaan ayaa lagu magacaabi jiray Harriet Tubman waxeeyna ahaan jirtay mid mudo dheer la adoonsan jiray taas oo ay si qasab ama xoog ah ku heesteen dad cadaan ah .
Wasaarada Maaliyada dalka Mareeykanka ayaa ku dhawaaqday in lacaga Dollar-ka Mareeykanka qaasatan 20-ka iyo 10-ka Dollar lagu soo xasuusan doono Harriet Tubman .
Waa markii ugu horeeysay inta taariikhda la ogyahay oo lacagta Dollar-ka Mareeykanka lagu dhex arko sawirka qof madoow waxaana arintaan si weyn u soo dhaweeyay Malaayiin ka tirsan dadka Madaw ee ku nool gudaha dalka Mareeykanka .
Sideed ruux oo isku qoys ahaa oo lagu dilay Gobolka Ohio ( SAWIRO )